Baadhista karonaha - Lørenskog kommune
Baarista karonadu waxay u dhacdaa sidan Lørenskog kommune Marabtaa balan ah inaad iska barto karona, waxaad ka samaysan kartaa nedka. Hadaba si aad balanta nedka uga dalban kartid waxaad u baahan tahay inaad cinwaan ku leedahay Lørenskog iyo BankID/ ID mobilka.
Waxaan ku boorinaynaa dhamaan dadka kari kara, inay balan ka samaystaan nedka. Qofku balanta naftiisa wuu usamayn karaa. Caruurtiisa iyo cid kalena wuu u samayn karaa. Waa muhiim inaad hayso taariikhda dhalashada oo dhamaystiran (11 nambar), ama D- nambar cidda aad balanta u samaynayso
Her finner du den digitale bestillingsløsningen.
Hadii aanad haysan BankID, ama aanad degenayn Lørenskog, waxaad wici kartaa taleefanka karonaha ee ah 67495027, si aad balan u dalbato. Waxaa la wici karaa isniin –sabtikl:08:30-15:00 iyo axadda kl:10-14:00
Uma baahnid inaad wacdo taleefanka karonaha, haddaad balanta nedka ka dalbatid.
Waaa muhiim inaad is baartid, hadii ay jirto suurtogalnimo ah inaad qaaday karona. Qof kasta oo calaamado xanuun ah ka dareema hawomareenka, waa inay iska baaraan xanuunka karonaha.
Xarunta la iskubaaro ee Lørenskog waxay ku taalaa Løkenåsveien 29, waxay ku xigtaa kaniisada Skårer. Hadii aanay suutogal kuu ahayn inaad timaado xarunta la iskubaaro, waxaad dalban kartaa in aanu guriga kuugu nimaadno oo baritaan kaa qaadno.
Raadraacista qaadista karonaha
Kooxda degmada Løerenskog u qaabilsan raadraacita qaadista karonaha, way ku soo wacayaan hadii ay u muuqato inaad karona qabtid. Waxay kaa soo wacayaan nambarka 40409838. Haddaad taleefankaaga ku aragtid nambarkan oo aanad ka jawaabin, waa in aad nasoo wacdaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Aad bay muhiim u tahay in aanu helno oo xidhiidh la samayno qof kasta oo aanu wacno.
Sist endret09.04.2021 22.44